Deg Deg: Dhallinyaro Soomaali ah oo dhimasho iyo dhaawac loo geystay -
Deg Deg: Dhallinyaro Soomaali ah oo dhimasho iyo dhaawac loo geystay
Waxaa saacado ka hor magaalada Columbus ee gobolka Ohio lagu toogtay wiil dhallinyaro ah oo Soomaali ah, halka midkale loo geeystay dhaawac.
Wiilka dhintay ayaa u dhintay toogasho iyo xabad lala beegsadday. Wiilka dhaawaca ah ayaa isagana waxaa ku dhacday xabad lala beegsadday, ilaa iyo haddana lama oga xaaladiisa caafimaad waxa ay ku sugan tahay.
Goobta dhallinyadan lagu toogtay ee dambiga dhimashadda iyo dhaawac geystay uu ka dhacay ayaa waxaa sidoo kale shil ku galay gaari ay dhallinyaradan qaar kamid ahi ay wateen.
Ilhaa iyo hadda lama oga cida ka dambeysay falkan dambi ee sababay dhimashadda iyo dhaawaca. Waxaa maalmahan dib u soo noqnoqonaya is xabadaynta iyo dilalka dhallinyarada Soomaalida ah loo geeysto ama ay isku geystaan.
Magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa waxaa aad ugu soo batay dilalka ay dhallinyaradda Soomaaliyeed isku geystaan. Wixii akhbaar dheerad ah ee ku soo kordha dilka wiilkan Soomaaliga ah iyo wiilka la dhaawacay waxaad kala socotaan Tusom Times.
Related Items:Featured, Somali community, Youth
Masaajid Minnesota ku yaala oo markale la weeraray,burbur iyo khasaarana loo geystay
Body of missing woman Naima Hassan found